» एकताका चर्चित बनेको “रिंकीबुङको राँगोलाइ” गीतका गायक सुरेश गन्धर्व बिरामी,यस्तोअवस्थामा सहयोग गर्ने कोहि भएनन एकताका चर्चित बनेको “रिंकीबुङको राँगोलाइ” गीतका गायक सुरेश गन्धर्व बिरामी,यस्तोअवस्थामा सहयोग गर्ने कोहि भएनन – हाम्रो खबर
एकताका चर्चित बनेको “रिंकीबुङको राँगोलाइ” गीतका गायक सुरेश गन्धर्व बिरामी,यस्तोअवस्थामा सहयोग गर्ने कोहि भएनन
एकताका चर्चित बनेको सिके श्रेष्ठले रचना गरेको यो गीतका गायक हुन सुरेश गन्धर्व । उनी अहिले बिरामी छन् । बिरामीले उनी थलिएका छन् ।
६५ वर्ष अघि भोजपुरको जरायोटारमा जन्मिएका उनले थाहा पाउँदा देखिनै सारङ्गी बजाउने गर्दथे । सारङ्गी रेट्दै हिँडेको करिब ५० वर्ष बढी भएको छ । जीवनमा उनले धेरै गीत गाए । धेरैको मन जिते । तर पछिल्लो समय सुरेश गन्धर्वको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि दुई छाक टार्न धौ धौ परेको छ ।
लामो समय देखि कर्मथलो धरानलाई बनाएका सुरेश गन्धर्व यति बेला धरान-८ बरगाछीमा कोठा भाँडामा बस्छन्। उनलाई पछिल्लो समय मुटुरोग, युरिक एसिड (वाथ), सुगर (मधुमेह), प्रेसर,थाइराइड जस्ता रोगहरूले च्यापेको छ ।
उनी भन्छन् ‘लकडाउन नहुँदा दिनको ४-५ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो, चाडपर्व हुँदा हजार बाह्र सय कमाउँथे, अहिले लकडाउन सँगै कोरोनाको कहरका कारण आम्दानी छैन, रोगी भएर थलिएको छु।’ नेपाल भारतका धेरै ठाउँहरू हिँड्दा धेरै धेरै दुःख,भोक र प्यास, तिता बचन सहेर लोकभाकामा निरन्तरता दिएको उनी बताउँछन् । बजार क्षेत्रमा त प्रहरीले टिकी खान दिँदैनथे ।
काठमाण्डौको पशुपति बनकालीनमा २०६० सालमा रोडमा बसेर गीत गाउँदा एक प्रहरी अधिकृतले ‘तेरो मुन्टो चुँडाएर फालिदिन्छु’ सम्म भनेको तितो स्मरण सुनाउँछन् । कतिपय स्थानमा गाउँघरका मानिसले पनि बचन लाउने गर्दथे, धेरै चित्त दुख्छ तर सहन्छु गन्धर्वले भने ।
उनकी काइँली छोरी तारा गन्धर्वले भनिन् ‘सारङ्गी बाध्य वादनबाट बुबाले केही पैसा ल्याउनु हुन्थ्यो । बिरामीले थला परे पछि कमाउने कोही छैनन् । दैनिक गुजारा गर्न निकै सकस परेको छ’ । ‘गन्धर्व जातिको पुर्खौली पेसा नै सांरगी बजाउनु भएकाले गर्दा आफू यस पेसामा खुसी छु’ उनी भन्छन् । म बाँचिरहे सम्म सारङ्गी बजाई रहन्छु । गाउन धेरै मन छ तर स्वास्थ्यले साथ नदिने उनी बताउँछन् ।
पृथ्वीनारायण शाहको पालाका त्यस अघि राजाको पालामा सत्य घटनामा आधारित हत्याहरू र पर्वहरूको जानकारी लोकगाथा बनाएर गन्धर्वले सुनाउने चलन थियो । सूचना जस्तै हुन्थ्यो । तर, अहिले प्रविधि सँगै आधुनिक बाजा बजाउँछन् । पछि त सांरगी के हो ? भन्छन् होला र ? त्यसैले सांरगी जर्गेना गरी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न राज्यले सहयोग नगरेको उनी बताउँछन् ।
कलाकर्मीलाई देशको गहना भने पनि त्यसलाई सरकारले व्यवहारमा उतार्न नसक्दा वरिष्ठ कलाकारहरू समेत बुढेसकालमा पुगेपछि बेसहारा बन्नु परेको साथै कसैले पनि याद समेत नराख्ने गरेकोमा उनको गुनासो छ । लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा योगदान पुराएका गन्धर्वलाई कुनै यति बेला कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय तह, सरकार, साङ्गीतिक संस्था, नेताहरूले आर्थिक सहयोगको त परको कुरा सोधपुछ समेत नगरेको उनी बताउँछन् ।
त्यो बेला जल्दोबल्दो उनै सुरेश गन्धर्व यति बेला आफ्नो स्वास्थ्यमा आएको प्रतिकुल अवस्थासँग पैठेजोरी खेलिरहेका छन् । उनी भन्छन् लोक भाका र सारङ्गी माया गर्नेहरूले मलाई सहयोग गरिदिनुस् । लोक बाजा सारङ्गीलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु ।
कलाकार देशका गहना हुन । हामीले त्यो गहना को मूल्य बुझ्नु पर्छ । शरीरमा तागत हुँदा सम्म आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई जोगाउन कम्मर कस्नेहरू अहिले उमेर ढल्किए सँगै थला पर्दा कतैबाट सोधी खोजी समेत नहुनु आफैमा दुखद छ । तसर्थ देशकै लागि लोक संस्कृतिमा योगदान पुर्‍याएका यस्ता स्रष्टालाई हरेक तह तप्काबाट संरक्षण र सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ ।कपुरी न्युज बाट